Uru nke tebụl mabụl
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ iji mgbochi tebụl n'ihi ọdịdị ya mara mma na ọtụtụ atụmatụ ndị mara mma.
Nke mbụ, ịdị elu dị elu Ọ dịghị mfe deformation.Ndị e bu pụta ụwa bụ ịgafe ọtụtụ afọ iji wee kee ya. Na linear mgbasa ọnụọgụ dị obere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nrụgide dị n'ime. Ya mere ya ekweghị ekwe bụ oké elu, na ojiji nke usoro ga-deformation.
Nke abuo, na-eguzogide ọgwụ na acid. Ebu marble nke nhazi nke ya bu otu, ya mere, odighi nfe ihapu mbuze nke mmiri mmiri acid.When ojiji dịkwa mkpa ekwesịghị ịdabere na ọgwụ iji meziwanye mmekọrịta nwoke na nwanyị, na-ebili dị mfe ma dị mma.
Nke atọ, nguzogide akwa akwa na nguzogide okpomọkụ dị elu. N'ihi na ekweghị ekwe nke mabul ihe elu, na rigidity dị mma nke ukwuu, ya mere ya eyi eguzogide dịkwa ike. Ọbụghị naanị nke ahụ, nguzogide ya dị elu dịkwa mma. Ọ gaghị abụ mgbanwe okpomọkụ na nrụrụ. Na ụlọ okpomọkụ nwere ike ịnọgide na-enwe ọdịdị anụ ahụ mbụ ya. Ya mere, ndụ ọrụ dị ogologo.
Nke anọ, anụ ahụ siri ike. Ọdịdị nke marble sitere na nlezianya na ọbụlagodi. Ọbụna n'ihe banyere mmetụta dị na mpụga, ọ gaghị ewe iwe, enweghị oke ya ga-emetụta ya .N'ihi na ihe ahụ siri ike, ọ nwere ike ịkwado enweghị nrụrụ mgbe eji ogologo oge na mgbochi nchara, antimagnetic, mkpuchi.
Nke ise, enweghi magnetization. Ngwongwo marble na-agbanyeghi ogologo oge o jiri mee ihe agaghi egosi na ọ nwere ike magnetized, nwere ike ibugharị yana ọ gaghị emetụta mmiri.
N'ihi uru ndị a, a na-eji tebulu marble emewanye ọtụtụ, na imewe ahụ dịkwa iche iche. Na mgbakwunye na tebụl marble dị mfe, enwere ike jikọta ya na ihe ndị ọzọ, nkwekọrịta site na ịchọ mma pụrụ iche.